KULANKA WAKAALADDA 24AAD: DIB-U-EEGID, QEEXIDA ASTAAMAHA IYO TILMAAMAHA ISTICMAALKA - KUFSI
Kobcinta wax soo saarka shisheeye waxaa lagu kala soocaa shaqeyn wanaagsan, kulamo tayo sare leh iyo waxqabadka la isku halayn karo. Inta badan hawlaha qalabkaas oo kale ah waa kuwo ismaamul ah oo uma baahna dareen joogto ah beeralayda. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee isweydaarsiyada guryaha waa shirkadda Talyaaniga Novital. Isku xirnaanta kala duwan ee taxane ah ee Taxatutto waxaa loogu talagalay in lagu daboolo digaagga 6-162. Isugeynta wadar ah 6 nooc oo karti leh: 6, 16, 24, 54, 108 iyo 162 ukun. Waxyaabaha soo noqnoqda ayaa lagu kala duwan yahay heerarka tayada sare leh, muuqaalka muuqaalka ee daaweynta xashiishka iyo badbaadada isticmaalka.
Qaybta 24 waxaa loogu talagalay in lagu daro laguna yareeyo shimbiraha gudaha iyo kan duurjoogta ah - digaagga, turkiga, berriga, boodhadhka, xamaamka, digirta iyo shinbiraha. Tusaaluhu wuxu ku qalabeeyaa wax kasta oo lagama maarmaanka u ah shaqada waxtarka leh
casriga elektarooniga casriga;
Isbedelka heerkulka ayaa si toos ah u dhaca;
mugga muraayada muraayadda qoyaanka ee qubeyska ayaa ku filan in lagu hayo qoyaanka 55%;
daaqad aad u weyn oo dabool ah.
Markaad dooratid xariirka guriga, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa qaababka soo socda: "Layer", "Hagal", "Cinderella", "Titan".
Waxaa suurtagal ah helitaanka dheeraadka ah ee farsamo yaqaanada. Qaybta 24 ayaa laga sameeyey balaasti u adkeysi leh oo tayo sare leh oo midabkiisu yahay midab ama midab huruud ah. Tusaaluhu wuxuu ka kooban yahay:
qolka weyn ee qolka qashinka;
Qeybta hoose ee qolka dhalinta iyo kala-guurtida;
qaybta kontaroolada elektaroonigga ah ee sare ee daboolka.
Fiiri faa'iidooyinka iyo faa'iido darrida nooc kale oo ka socota soo saarahan - Covatutto 108.
Tijaabada talyaaniga ee ka badan 30 sano waxaa lagu gartaa tayada iyo kalsoonida kulubka. Xakamaynta elektarooniga ah maaha kaliya in la sameeyo xuduudaha xaddidaadda, laakiin sidoo kale waxay abaabushaa xakamaynta iyo isbedelka tooska ee xuduudaha kuwa la cayimay. Nidaamka elektarooniga ah ee "Covatutto 24" ayaa kuu sheegi doona calaamad gaar ah oo ku saabsan baahida loo qabo in kor loogu qaado biyaha ama falalka kale. Nalalka elektaroonigga ah ayaa kaa caawin doona helitaanka qudaarta ugu wanaagsan. Nidaamka kuleylka ah ee nooca waxaa lagu sameeyaa qaab diyaarka ah oo leh qalabka polystyrene gudaha.
Miisaanka Dufanka 24 - 4.4 kg. Qiyaasaha kobcinta: 475x440x305 mm. Waxay ka shaqeysaa 220 V. Isticmaalka tamarta waqtiga la bilaabayo waa 190 V. Heerka qoyaanka waxaa bixiya biyo, kaas oo lagu shubay weelka qaybta hoose ee aqalka hoose (hoosta hoose). Heerka qoyaanka ee qoyaanku waa sareeya, markaa waxaad u baahan tahay inaad ku darto biyo 1 mar 2 maalmood. Taageeradu waxay ku taallaa dhinaca sare ee aqalka. Qaybta elektaroonigga ah waxaa lagu qalabeeyaa heerkulbeegtarooga digital ah iyo xakameyaha heerkulka.
Waa muhiim! Nadiifinta qoyaanka waa in aan lagu fulin meel u dhow hoyga, iyada oo biyaha biya-biyaha ah ay sababi karaan gaaban gaaban.
Qolka-qaboojiyaha waxaa la dhigi karaa:
24 ukun digaag;
Kobcinta waxaa loogu talagalay in la geliyo wax soo saaridda miisaanka soo socda:
ukunta digaaga - 45-50 g;
boodhadh - 11 g;
duck - 70-75 g;
goose - 120-140 g;
Turkiga - 70-85 g;
pheasants - 30-35 g.
Waxaan kugula talineynaa in aad la tashato sifooyinka digaagga taranta, ducklings, poults, goslings, shimbiraha guinea, quusto ee sabiib ah.
Qeybta elektarooniga ah ayaa maamula heerkulka iyo qoyaanka. Si loo xakameeyo heerkulka, heerkulbeega iyo dareeraha waxaa la bixiyaa in kiciya kuleylinta haddii ay heerkulku bilowdo inuu hoos u dhaco. Marka la eego, heerkulka qolka waxaa lagu dejiyaa +37.8 digrii. Xaqiijinta hagaajinta ± 0.1 digrii.
Tusatutto 24 Electronics ayaa kuu sheegi doona waxa aad u baahan tahay:
flip - icon leh ukun;
ku dar biyo - astaanta leh qubeyska;
si aad u diyaariso qalabka loogu talagalay hirgelinta - calaamad u leh digaag.
Dhammaan tallaabooyinka waxaa la socdo tilmaame indhoole ah iyo calaamad dhawaaq.
Si loo abaabulo sarrifka hawada, soo-saaraha ayaa kugula talinaya in ruxruxa qolka 15-20 daqiiqo maalintii, laga bilaabo maalinta 9-aad ee qaboojinta. Waxaa suurtagal ah in la joojiyo hawo qaadashada qoyaan ka yimaada buufin. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay ukumaha biyaha daadka - ducks, bass. Farsameynta habka wareegga ee wax-soo-saarku kuma jiraan. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad ukumaha u rogto 2 ilaa 5 goor maalintii. Si ay u sahlanaato in la xakameeyo in ukumaha oo dhan la rogo, calaamadaha midkood ku calaamadee calaamada cuntada.
Ma taqaanaa? Digaagga waxay cuni karaan ukumaha, xataa iyaga u gaar ah. Tusaale ahaan, haddii ukumo la gooyey, waxaa badanaa la cuni karaa ukumaha laftiisa.
Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka tusaalaha Tusatutto 24 note:
kiisku waa mid daba-dheer, heesta;
rinjirta kuleylka ah ee jidhka waxaa laga sameeyey maaddooyin oo leh kulayliye hooseeya;
fududahay nadiifinta iyo nadiifinta;
cutubka elektarooniga ah oo fekeraya oo shaqaynaya;
dareenka heerkulka oo la isku hallayn karo oo sax ah;
universality of model: Hormar waxaa suurtogal ah in la socda taranka ee digaagga;
suurtagalnimada in lagu kululeeyo noocyada kala duwan ee shimbiraha;
qiyaasaha yar ayaa u oggolaanaya inuu qalabka ku rakibo meel kasta oo habboon;
waxaad si fudud u dhaqaajin kartaa qalabka;
Dhibaatooyinka noocan ah:
awoodda ayaa lagu xisaabiyey iyadoo la eegayo qiyaasta ukunta dhexdhexaadka ah iyo kuwa dhexdhexaadka ah;
Tusaaluhu ma aha mid qalabaysan oo qalab u leh;
Beeraleygu wuxuu u baahan yahay inuu ku lug yeesho geedi socodka dhalinta: u leexo walxaha kuleelka, ku dar biyo, iyo hawo-qaadasho.
Si aad u heshid boqolkiiba sare ee chicks kumbuyuutarka, soo saaraha ayaa kugula talineysa in aad raacdo xeerarka ku shaqeynaya qalabka:
Qalabka 24 ayaa lagu rakibay qol leh heerkul qol aan ka yareyn +18 ° C;
qoyaanka qolka waa inaan ka yarayn 55%;
qalabku waa inuu ka baxaa qalabka kulaylka, daaqadaha iyo albaabada;
hawada qolka waa in ay ahaato mid nadiif ah oo cusub Wuxuu ka qaybqaataa geeddi-socodka hawada hawada gudihiisa.
Waa muhiim! Wax-qabad kasta oo qaboojiyaha lagu samayn karo waxaa lagu sameyn karaa oo keliya marka laga jaro caanaha.
Si loo diyaariyo qalabka loogu talagalay hawlgalka waa lagama maarmaan:
Ka raaci qaybaha caagga ah ee aqalka kuleylka leh xal jeermis dilaac oo qalalan.
Isku duub qalabka: ku rakib biyaha qubeyska, hoose hoose, kala-goynta.
Ku shub biyaha qubeyska.
Deji goobaha heerkulka la doonayo.
Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo biyo diirran, sababtoo ah kuma jiraan waxyaabo aan nadiif ahayn iyo bakteeriya.
Si aad ukumaha u geliso kuleyliyaha, ka dib markii tilmaamayaasha heerkulka la dhigay, waxaad u baahan tahay inaad kala furfurto qalabka shabakadda. Ka dibna daboolka fur oo ku rid qalabka kuleelada meel bannaan oo u dhaxeeya kala qaybsanaha la isku rakibay. Isku duwo Khariidadda 24 iyo iskudubka shabakada.
Waxaa laga yaabaa inaad ka faa'iideysato inaad ogaato sida loo ogaado iyo goorta la siinayo ukumaha qandhada.
Hibo u dooro ukunta:
cabbirka isku mid ah;
aan lahayn cillado dibadeed;
qaadatay digaag caafimaad qaba ugu dambeyn 7-10 maalmood ka hor inta aan la saarin;
lagu kaydiyaa heerkul aan ka hooseeynin +10 digrii.
Ka hor intaan la dhigin ukumaha waa in la kulaalaa qol leh heerkul aan ka yarayn +25 8 saacadood. Dhibaatooyinka qolofka waxaa lagu hubiyaa baaritaanka iyo haddii, haddii qolka hawada hawada lagu ogaado, qolofka marmarka ah, ee qaabka qaabka loo yaqaan 'deformed', waa la diiday.
Ka hor intaan la dhigin ukumaha maskaxda, waa in la nadiifiyaa.
Waa muhiim! Haddii heerkulka ukumuhu ka hooseeyo + 10 ... +15 digrii, markaa xiriirka hawada kulul ee gudaha kondensatada ayaa laga yaabaa inay ku sameeyaan, kuwaas oo gacan ka geysta horumarinta caaryada iyo microbes gelitaanka qolofka.
Shuruudaha isugeynta ee digaagga noocyada kala duwan ee shimbiraha waa (maalmaha):
boodhadh - 16-17;
Qaybaha - 23-24;
digaagga - 21;
hiddaha guinea - 26-27;
pheasants - 24-25;
ducks - 28-30;
berriga - 29-30.
Waqtiga la filayo guurka cuncunku waa 3-ta maalmood ee ugu dambeysay muddada kabadan. Maalmahan, ukumo looma celin karo oo aan laga baari karin biyaha.
Hannaanka geedi-socodka waa inuu fuliyaa:
rukunka hal mar maalintii 15-20 daqiiqo;
ukunta oo lumiya 3-5 jeer maalintii;
ku dar biyaha si habka qoyaanka.
Nidaamka maareynta qalabka ayaa kuu sheegi doona waxa loo baahan yahay in la sameeyo boodh.
Calaamadaha heerkulka iyo qoyaanka xilliga ukunta digaagga ah:
xilliga bilowga hargabka, heerkulka kuleylaha waa +37.8 ° C, qoyaan 60%;
10 maalmood ka dib, heerkulka iyo qoyaanka waxaa loo yareeyey +37.5 ° C iyo 55%, siday u kala horreeyaan;
dheeraad ah ilaa todobaadkii ugu dambeeyey ee kaboojinta, qaabku isma bedelo;
maalmaha 19-21, heerkulku wuxuu ku jiraa +37.5 ° S, qoyaanku wuxuu kordhay 65%.
Marka go'aamada heerkulku dhecaan, buuqu waxay ka dhacdaa nidaamka horumarka embriyaha. Qiimaha hooseeya, jeermiska ayaa jimicsiga, iyo qiimaha sarreeya, cuduro kala duwan ayaa horumariya. Haddii maaddada qoyaanka aysan ku filnayn, qolofku wuu qallajiyaa iyo dhumucdiisuna, taasoo si weyn u adkeyneysa qaadista digaagga. Qoyaanka dheeraadka ah waxay keeni karaan digaaga si ay ugu dhejiso qolofka.
Fiiri sifooyinka qandhada ukunta ugu fiican.
Saddex maalmood gudahood ka hor intaan hirgelin, kala-tagayaasha ayaa la saaraa, taangiga waxaa ka buuxsamay qadarka ugu sareeya ee biyaha. Ukunta looma beddeli karo mar dambe. Chicks waxay bilaabaan inay ku tufaan iyaga keligood. Qabashada chicks waxay u baahan tahay wakhti ay qalalaan. Digaagga qallalan ayaa noqda mid firfircoon oo laga saaraa kulaylka si uusan u faragelin inta kale. Qaybta ugu fiican ee jiirka waa in ay dhacaan 24 saac gudahood. Si uu taranku u noqdo mid ku siman, ukumaha cabbirka isku midka ah ayaa la qaadaa.
Ma taqaanaa? Digaagga ayaa la seexan kara qeyb ka mid ah maskaxda, halka badhkeedna ay xakameyso xaaladda shimbirta. Awoodgan waxaa loo sameeyay horumarka ka dhalanayo horumarinta, sida dariiqa ilaalinta ugaarsadayaasha.
Qiimaha Foratutto 24 ee alaab-qeybiyeyaasha kala duwan waxay u dhaxeysaa 14,500 ilaa 21,000 Rubi Ruush. Qiimaha qalabka ee Ukraine laga bilaabo 7000 ilaa 9600 UAH; ee Belarus - laga bilaabo 560 ilaa 720 roon. Kharashka tusaalaha ee dollarka waa 270-370 USD. Soo-saaraha wacyigelinta Qalabka iibka ah ee qalabka oo kaliya iyada oo loo marayo qaybiyeyaasha, shirkadu ma fulin si toos ah u keenista.
Falanqaynta farsamooyinka laga bilaabo Novital ee forumyada kala duwan waa wax wanaagsan. Waxaa ka mid ah caqabadaha ay ku qoran yihiin kharashka qaaliga ah ee qalabka iyo sidaas darteed kuwa iibsaday hanti-wareejiyaha beer yar oo gaar ah waxay door bidaan in ay tixgeliyaan isbarbardhicir jaban.
Marka la eego tayada iyo kalsoonida, waxay ku jiraan heer sare waxayna damaanad qaadaan boqolkiiba sagaashan oo ka mid ah shuruudaha is-qabsiga. Kuwaatutto 24 users waxay ku talinayaan qalabkan inuu yahay qalab lagu kalsoon yahay oo si fudud loo maareeyo qalabka oo ku habboon xitaa kuwa bilawga ah.
Bixintii guga ee sanadkan 2013 (oo leh mootada loogu talagalay darbi). Heerkulku wuu ku fiican yahay, afduubku wuu shaqeeyaa. Haatan dhoofi turkiga (shan ayaa horay loo soo raray, saddex wali waa ay socdaan). Waxaa jiray miis la isku daray (digaagga iyo turkiga), taariikhaha kala duwan ee ka noqoshada. Waa suurtogal in laga tago qayb ka mid ah ukumaha, oo qayb ka ah (qiyaastii shan) si ay u abaabulaan aag hatch ah oo aan lahayn afduub. Hawlaha "aan la diiwaangelinin" by smile3, oo, sida aad fahamsan tahay, horumariyayaashu ma aragin, laakiin haddii aad runtii aad rabto - markaa waad dharbaaxi kartaa3 (mid ka mid ah qaybaha (qaybta) qaybta ku xiran dhinaca qaybta nidaamka gumeysiga ee kufsiga iyo wuxuu ku yaal miiska isbeddelka). iyadu iyo "nool" curadka hore). Tilmaamayaasha - Dregs, laakiin Ineta horeyba waxay u muuqatay sharaxaad caadi ah oo ku saabsan habka qaabaynta. Mid ka mid ah waa wax xun - kuma filna, laakiin waa shirkad hoosaad, ma ahan dhaqaale "ganacsi" - super. Shaqada ugu yar ee adeega ugu sarreeya / tayada. Waa wax xun inaaney jirin ilaalo tamar kaydin ah ee 12V, laakiin waxaan haystaa ilo madax-bannaan oo horey loo hirgeliyey (qorraxda / batroolka / casriga), gaaban, waa calaamad aniga ii ah. Taageeruhu ma sameeyo qeylo badan, gawaarida afduubtu waxay noqon doontaa mid sii kordhaysa.
Xaaladda jaalaha ah, heerkulbeegga ayaa gacanta lagu hayn karaa, waxaa jira qaab liin leh orodyah elektaroonig ah; haddii biyuhu soo baxaan, dhalada ayaa kor u kacda, taas oo macnaheedu yahay inaad u baahan tahay inaad kala qaybiso biyaha.